ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ - Atlas Copco Thailand
Industrial Air Porduct for Myanmar
ကုန်ပစ္စည်း နှင့် ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ
Atlas Copco technician local on-site service
ဆိုဒ်အတွင်း Atlas Copco မှနည်းပညာကျွမ်းကျင်သောသူဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးခြင်း
Atlas Copco ဘက်မှ သင်၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား၍ သင်၏ နည်းပညာ စနစ်ကို တိုးတက်စေရန်နှင့် စွမ်းအင်ချွေတာမှု သို့မဟုတ် ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် လုပ်ငန်းများတိုးတက်လည်ပတ်စေရန် တို့အတွက် အကောင်းဆုံးသောနည်းလမ်းများကို အကြံပေးနိုင်ပါသည်။ သင်အသုံးပြုနေသည့် မည်သည့်အမှတ်တံဆိပ်၊ အရွယ်အစား (သို့) မည်သည့်အမျိုးအစား လေဖိအားစနစ်ကိုမဆို သင့်လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ သင့်တော်ကောင်းမွန်သော ၀န်ဆောင်မှုနှင့် စက်၏အစိတ်အပိုင်းများကို သင့်အားထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါသည်။
အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သောနည်းပညာရှင်များစွာတို့သည် နိုင်ငံတဝှမ်းတွင်ရှိနေပါသည်။ ထိုသူတို့သည် စက် ပစ္စည်း နှင့် ပတ်သတ်သောသင်တန်းများ၊ ကွန်ပရက်ဆာ အသစ်စက်စက်နှင့် အဟောင်းတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်ပုံမှန်စက်ရုံတွင်းလေ့ကျင့်ခြင်းများ နှင့် သင်တန်းများစွာတို့ကိုတက်ရောက်သင်မြောက်ထားကြသူများဖြစ်ကြပါသည်။ Atlas Copco မှ နည်းပညာရှင်များ၏ အကူအညီဖြင့် သင်၏ စက် ပစ္စည်း တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် အဆင်မပြေမှု များကိုအမြန်ဆုံးသိရှိနိုင်ရုံသာမကအလျင်မြန်ဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်ပြီး၊အကောင်းဆုံးသောထုတ်လုပ်မှုများစွာကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ရရှိစေမှာ သေချာပါသည်။
ကြိုတင်ကာကွယ်ပြုပြင်ခြင်း အကောင်းဆုံး ကွန်ပရက်ဆာလုပ်ဆောင်ချိန် အစီစဉ်ဆွဲခြင်း ကြိုတင်ကာကွယ်ပြုပြင်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြင့် သင့် ကွန်ပရက်ဆာ၏စွမ်းအင်များပိုမိုထိရောက်စွာ တိုးမြှင့်လာခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ချိန်များကို ပိုမိုရရှိစေပြီးအကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်ပေးခြင်း
အပြည့်အ၀တာ၀န်ခံမှု အစီအစဉ်နှင့်အတူ ပြီးပြည့်စုံသောကွန်ပရက်ဆာထိန်းသိမ်းခြင်း သင်၏ ကွန်ပရက်ဆာအတွက် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများ၊ အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ၊ ပြင်ဆင်မှုများနှင့် အခြားစက်ပျက်ယွင်းမှုအားလုံးပါ၀င်ပြီးဖြစ်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှဆောင်ရွက်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း
သင်၏ လေဖိအားကွန်ပရက်ဆာ တပ်ဆင်ခြင်းကို iitrak တိုင်းတာခြင်းစနစ်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း iitrak တိုင်းတာခြင်းသည် သင်၏ကွန်ပရက်ဆာကိုစွမ်းအင်ထိရောက်မှု တိုးတက်စေရန် ယုံကြည်စိတ်ချရသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကောင်းမွန်သောအခြေခံအကြံပြုချက်များကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။
အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရရှိရန်အတွက် လေအား ကွန်ပရက်ဆာကိုအဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်း သင်၏စွမ်းဆောင်ရည်၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုတို့ကို တိုးတက်စေရန် သင်၏ ကွန်ပရက်ဆာကို နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာ၊ အစိတ်အပိုင်းများဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်လိုက်ပါ။
VSD Variable Speed Drive Service Atlas Copco Oil-lubricated compressors Products Technical
Atlas Copco အကြောင်း ပိုမိုသိရှိလိုပါက ဆက်သွယ်ရန်
Thae Pyae Pyae Ko
ကျွန်တော်တို့ Atlas Copco ၏ ထူးခြား‌သော G-Series သည် သင့်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် အနိမ့်ဆုံးလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်၊ ကြာရှည်ခံမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် တို့ကို ယူဆောင်လာပါပြီ။
Decreasing your energy consumption with GA VSD
လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည်လေထုလိုအပ်ချက်ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များလိုအပ်သောလေကိုလိုအပ်သောအချိန်တွင်ရရှိရန်သေချာစေရန် Compressor အတွက် Variable Speed Drive (VSD) နည်းပညာကိုကျွန်ုပ်တို့ရှေ့ဆောင်လုပ်ခဲ့သည်။
AQ-Model, ‌ရေအသုံးပြုပြီး လေထုတ်ပေးသော ကွန်ပရက်ဆာသည် သင်လိုချင်သော ဆီမဲ့လေသန့် လိုအပ်ချက် နှင့်ကိုက်ညီသည်။ ၎င်းတို့သည်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် သန့်ရှင်းမှုရှိရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အကောင်းဆုံးစွမ်းအင်ကိုပေးသည်။
NGP+ , premium N2 generator with PSA
ကျွန်ုပ်တို့၏ NGP+ ပရီမီယံနိုက်ထရိုဂျင် ထုက်လုပ်သောစက်များသည် စွမ်းအင်အမြင့်ဆုံးဖြင့် နိုက်ထရိုဂျင် ထောက်ပံ့မှုကို အပြည့်အဝပေးနိုင်သည်။ Carbon Molecular Sieves ဖြင့် အမြင့်ဆုံး သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှုနှင့်အတူ အဆင့်မြင့် နိုက်ထရိုဂျင်ကိုအာမခံထုက်လုပ် ပေးပါသည်။ သင်ကိုယ်ပိုင် ထုတ်လုပ်နိုင်မှတော့ ဘာ့ကြောင့် N2 ဓာတ်ငွေ့ ကို၀ယ်နေတော့မှာလဲ?
သင်ကိုယ်ပိုင် ထုတ်လုပ်နိုင်မှတော့ ဘာ့ကြောင့် အောက်စီဂျင်ကို ၀ယ်နေတော့မှာလဲ? ကျွန်ုပ်တို့၏ OGP PSA အောက်စီဂျင်စက်သည် သင်လိုအပ်သော ပမာဏ ကို သန့်ရှင်းစွာ မြင့်မား‌သော ပမာဏ ဖြင့် ထုက်လုက်‌ပေး ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသော လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ဖိအားဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သော နည်းပညာ (PSA) နှင့်အတူ။
ကျွန်တော်တို့၏ထူးခြားသော G range နှင့်အတူ Atlas Copco သည် သင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန် အနိမ့်ဆုံးလည်ပတ်မှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ ကြာရှည်ခံမှု၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည် တို့ကို ယူဆောင်လာပါပြီ။
စျေးကွက်တွင် ဦးဆောင်နေသော GA-Model,ဆီထိုးသွင်းထားသော (ဆီအသုံးပြု သော) ကွန်ပရက်ဆာသည် အလွန်ခက်ခဲသောပတ်ဝန်းကျင်၌ပင် ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်ပေးမှု၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားမြင့်မားမှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှု တို့ကိုပေးစွမ်းပါသည်။
အခမဲ့!! Atlas Copco ၏ iiTrak နည်းပညာဖြင့် သင်၏ ကွန်ပရက်ဆာ စွမ်းအင်ကို အခမဲ့စစ်ဆေးပါ
iiTrak စွမ်းအင်စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း - စွမ်းအင်ချွေတာရန်အတွက် ကွန်ပရက်ဆာတွင် စစ်ဆေးတိုင်းတာခြင်း !! iiTrak Instrument ဖြင့်စစ်ဆေး တိုင်းတာပြီး၊ ပြုလုပ်သောတိုင်းတာမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ iiTrak Instrument သည် စွမ်းအင်ချွေတာမှုဖြစ်နိုင်ခြေ အချို့ကို ထုတ်လုပ်အကြံပြုပေး နိုင်ပါသည်။
AQ ရေထိုး ဆီမဲ့ဝက်အူ ကွန်ပရက်ဆာ
သင်၏ လုပ်ငန်း အတွက်လိုအပ်သော သန့်စင်‌သော၊ ဆီပါဝင်မူမရိုသော လေ ကို AQ-Model ကွန်ပရက်ဆာ က ထုက်လုပ် ပေစွမ်းနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကွန်ပရက်ဆာ သည် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် သန့်ရှင်းမှု ရရှိရန် အကောင်းဆုံးစွမ်းအင်ထိရောက်မှု ကိုပေးစွမ်းပါသည်။
NGP- မော်ဒယ် - နိုက်ထရိုဂျင်
တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီး အဆင်သင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ NGP(PSA) နိုက်ထရိုဂျင်ထုက်ပေးသော စက်များသည် သင်၏ လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော သန့်ရှင်း‌သောနိုက်ထရိုဂျင် (Purity) ထုက်လုပ်ပေး နိုင်ပါသည်။ အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်း Applications များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
OGP- မော်ဒယ် - အောက်စီဂျင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ OGP PSA အောက်စီဂျင်စက်များသည် သင်လိုအပ်သော အောက်စီဂျင် အရည်အသွေး (Purity) ကို ထုပ်လုပ်ပေး နိုင်ပါသည်။ ဖိအားလွှဲ စုပ်ယူမှု (PSA) နည်းပညာ နှင့်အတူ အမျိုးမျိုးသော လုပ်ငန်း Applications များအတွက် အသုံး ပြုနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို၏ Atlas Copco အ‌ရောင်း အင်ဂျင်နီယာများ၊ Atlas Copco
ကျွန်ုပ်တို၏ Atlas Copco အ‌ရောင်း အင်ဂျင်နီယာများ၊ Atlas Copco အ‌ရောင်းကိုယ်စားလှယ်များ နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ရေး အင်ဂျင်နီယာ များသည် Atlas Copco သုံးစွဲသူများ၏ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အဆင်‌ပြေချော မွေ့ စွာလည်ပက် နိုင်စေရန် နှင့် အ‌ကြောင်းအမျိူးအမျိူး ကြောင့် စက်ရပ်တန့် သွားပါက စက်ပြုပြင်ချိန် ကိုအနည်းဆုံးလျော့ ချ ၍ လုပ်ငန်းခွင် တွင် အမြန်ဆုံးလည်ပက် နိုင်စေရန်အတွက် သုံးစွဲသူများကို ထောက်ပံ့ထားပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ Atlas Copco ရုံးချုပ်သည် GMS (မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ) နိုင်ငံများဖြစ်သော မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယားနှင့် လာအိုနိုင်ငံများကို ထောက်ပံ့ပေးနေပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀န်ဆောင်မှုများသည် ကုန်ထုတ်စွမ်းအား၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့် အဆင်ပြေချောမွေ့မှုကို အာရုံစိုက်ပါသည်။
G-Model (Oil Injected Screw Compressor)
G-Model (Oil Injected Screw Compressor), တပ်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး ရွေ့လျားသွားနိုင် သော နိုင်ထရိုဂျင် စက် (Complete Package)။ တိကျ သော စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ အမြင့်ဆုံးစွမ်းအင် ခြွေတာ ပေးသော နည်းပညာ။
GA ဆီသွင်း စက်မှုသုံး လေအား ဖြေရှင်းခြင်း
GA ဆီသွင်း စက်မှုသုံး လေအား ဖြေရှင်းခြင်း အပြည့်အဝပေါင်းစပ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အရည်အသွေးမြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး လေအားဖြေရှင်းခြင်း။ အဆိုးရွားဆုံးသော ပတ်ဝန်းကျင်များတွင်ပင် အနိမ့်ဆုံးစွမ်းအင် သုံးစွဲမှုနှုန်း၊။
ဆီထိုးသွင်း လေအား ကွန်ပရက်ဆာများအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းများ?
အချို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများ အတွက် ဆီထိုးသွင်း လေအား ကွန်ပရက်ဆာများသည် အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာ၊ဆေးဝါးနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်းကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းမျိုးအတွက်မသင့်လျော်ပါ ။ ၎င်းဆီသည် ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ်များလွန်းသည်။ အခြားသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဆီသုံးလေအားပေး ကွန်ပရက်ဆာများကို သုံးခြင်းသည် ပို၍ သင့်တော်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် ယေဘုယျအားဖြင့် ညစ်ညမ်းသောလေအားကို ခံနိုင်သောအရာများဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါတို့သည် ဥပမာများဖြစ်သည် -
မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက် 50% အထိစွမ်းအင်ချွေတာခြင်း!
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့် မော်တော်ဆိုင်ကယ်အစိတ်အပိုင်းများကို ဦးဆောင်နေပြီး Atlas Copco ကွန်ပရက်ဆာ အလုံး 30ကျော်ကို ၎င်းတို့၏ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အသုံးပြုနေပါသည်။ Variable Speed Drive (VSD+) နည်းပညာပါသော ၎င်းကွန်ပရက်ဆာစက်များသည် ကုမ္ပဏီအတွက် ပျမ်းမျှစွမ်းအင်ချွေတာမှုကို 50% အထိလုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
အအေးပေးအခြောက်ခံစက်နှင့်အတူ ရေထိုး AQ ကွန်ပရက်ဆာ
ဝီလ်မင်တန် (USA) အခြေစိုက်သည့် ကားဆေးမှုတ်ခြင်းနှင့် gear၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း သည် ကမ္ဘာ့ရှေ့ဆောင် ဆေးမှုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ဤကုမ္ပဏီသည် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှတစ်ဆင့် ပြိုင်ဘက်များ၏ ရှေ့သို့ရောက်နေရန်အတွက် ရှိပြီးသားနည်းပညာကို တိုးတက်အောင်
နိုက်ထရိုဂျင် - ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၏ လုံခြုံရေးအကာအကွယ် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာကာကွယ်မှု (သိုမဟုတ်)“ ကန် ကာခြင်း” သည် ဓာတုပစ္စည်း၏ ဖွဲ့စည်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် ကွန်တိန်နာ သို့မဟုတ် ကန်အတွင်းရှိ လွတ်နေသောနေရာများတွင် နိုက်ထရိုဂျင်ကို အသုံးပြုသော အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် အောက်စီဂျင်မော်လီကျူးများနှင့် ဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
ဆိုဒ်တွင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အောက်စီဂျင် ထုတ်လုပ်မှု
ကျွန်ုပ်တို့၏ အောက်စီဂျင်စနစ်များကို အသုံးပြု၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင် အောက်စီဂျင် အဖြစ်ထုတ်လုပ်ပါ။ PSA အောက်စီဂျင်အားပေးစက်မှ စ ၍ ၊ အခြောက်ခံရန် ကွန်ပရက်ဆာများ စက်များ၊ စစ်ထုတ်စက်များနှင့် ဖိအားမြှင့်စက်အထိ ဤထုတ်ကုန်များအားလုံးကို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရောင်းပြီးစျေးကွက်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်နေရာတည်းတွင် ၀န်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မှုကြောင့် သင်၏စနစ်တပ်ဆင်ချိန်နှင့် တပ်ဆင်ပြီးချိန်တို့၌ သင့်ကိုစိတ်ချရမှုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။